Kuvandudza Hutungamiri hweChikwata Munguva Dzisina chokwadi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Wtn » Kuvandudza Hutungamiri hweChikwata Munguva Dzisina chokwadi
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Wtn
Zvose zvekufamba uye kushanya, mumasangano akazvimiririra uye muhurumende, vakadzidza kuti mumusika wanhasi usina kugadzikana; nzanga uye kunyange nyika dzose dzinofanira kushanda pamwe chete kuti dziite zvakanaka.
Dr. Peter Tarlow, purezidhendi weWorld Tourism Network, uye muvambi weTourism Titbits akanyora nyaya yakakosha iyi pahutungamiriri hwechikwata muCOVID-19 nguva.
Kazhinji kazhinji nyanzvi dzekushanya dzinotaura nezve "kudyidzana uye hutungamiriri hwechikwata", asi zvinosuruvarisa izvo vazhinji vavo zvinorehwa neshoko iri ndezvekuti: "regai tione zvaungandiitire."
Agency-centric tourism, zvisinei, munguva ino yedambudziko rine chekuita nemamiriro ekunze, hondo, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika uye denda riri kuramba richiwedzera kuoma kubata zvakanaka.
Nharaunda uye kunyange nyika dzose dzinofanira kushanda pamwe chete kuti dzibatsire vose.
Kuti ikubatsire kuwana iyi nhanho yekubatana kwekushambadzira uye kubudirira funga mamwe eanotevera mazano:
Ona vaunoshanda navo sevakaenzana kwete sevanhu vaunofanira kushivirira. Kazhinji kazhinji isu tinowanzo kuona vafambidzani vekushanya chete kuburikidza neprism yebhizinesi redu pachedu. Hakuna bhizimusi rekushanya; asi kufamba uye kushanya inzira yekurarama yezvikamu zvipenyu zvakawanda zvinoshanda pamwechete zvakanyanya mufashoni yakafanana nemuviri wemunhu. Kana chero chikamu chikatadza, hurongwa hwese hunogona kunzwa kukanganisa.
· Gadzirai kuremekedzana nekuvimbana. Izvo zvakakosha kuti pave nechinangwa chakafanana chekushanya chinomhanya muhurongwa humwe chete. Kunyangwe vanhu vakasiyana vaine hunyanzvi hwakasiyana uye nhanho dzekugona, chakakosha ndechekuti kuzadzisa chinangwa ibasa remunhu wese. Vakuru vekushanya vanofanirwa kuyeuka kuti vari mumamiriro ehunyanzvi, havafanirwe kuve shamwari dzevamwe vavo, asi ivo vanofanirwa kukudziridza hukama hwakanaka hwekushanda.
· Usatya kuenda nehura hwako. Pane dzimwe nguva apo zvisinei kuti ruzivo rwupi rwunoita senge ura rako rinokuudza kuti iyi haisi iyo sarudzo chaiyo. Kazhinji intuition inogona kuita basa rakakosha mukuita sarudzo. Nepo isu tisingambode kufuratira data, usafuratira manzwiro ako ematumbo.
· Edza kukudziridza zviitiko zvakajairika nekushandisa nguva nevaunoshanda navo. Kazhinji, tinotonga vamwe zvisizvo nekuti tinofungidzira kuti tinonzwisisa bhizinesi remumwe munhu. Haisi ipfungwa yakaipa kuti vatungamiriri veCVB vapedze nguva yakati rebei vachishanda mukati memahotera, maresitorendi, uye zvinokwezva kuti vanzwisise kubva pakutanga-ruoko maonero izvo zvinonetsa nemikana. Nenzira yakafanana, varidzi vemahotera vangave vachitsoropodza nhamburiko dzokushambadza kweguta vangapedza zuva rimwe pagore vari paCVB kana kuti hofisi yevashanyi kuti vadzidze nhau yomukati pamusoro pokushambadzira munzvimbo yose kana kuti zvakasiyana.
· Gadzira yakabatana pamberi. Hazvina mhosva kuti nharo dzemukati dziri musangano rako dzingava dzipi, dzinofanira kuramba dziri mukati. Zvinoparadza zvakanyanya indasitiri yekushanya kana nharo dzayo dzemukati dzichiitwa pachena kana kuburitswa kumapepanhau. Izvo zvinoitika mukati meboardrooms zvinofanirwa kugara muboardroom. Dzidzisa vanhu vari muindastiri kuti mabasa anounza mabasa matsva uye kuti zvakanyanya kuoma (uye zvakanyanya hunyanzvi) kushanda pakuchengeta boka pamwechete pane kuriparadzanisa.
· Dzidzisai. Enda kune dzimwe nzvimbo utore manotsi, wozogovera zvawakadzidza nevamwe vako. Nharaunda yako haifanire kunge iri yekutanga ine zano rekuvandudza, asi kuti dzidza kubva kune vamwe uye wozokwenenzvera mazano avo. Tora zvakakosha kubva pane imwe neimwe pfungwa uye wozogadzirisa iwo mazano kune yako chaiyo mamiriro.
· Gadzira hurongwa hwevarairidzi. Tourism inzvimbo yakaoma zvekuti tese tinoda varairidzi. Vaperekedzi vanofanira kunge vakawanda kupfuura vadzidzisi. Vaperekedzi vanofanira kunge vari vanhu vanotimanikidza kuona mufananidzo mukuru uye kuti chimwe nechimwe chezvikamu zvekushanyirwa chinopindirana sei. Vanachipangamazano vakanaka vanofanirwawo kushanda mumwe nemumwe wedu sevashandi venetworking vanogona kutisuma kune vanhu vari kunze kwebhizinesi redu. Muindastiri umo vatengi havawanzotiudza zvichemo zvavo zvechokwadi uye vasingadzoke, vese vakuru vezvekushanya vanoda varairidzi vanogona kuita sevanovimbika, vagadziri vetarisiro, vanoongorora chokwadi uye panguva imwe chete vachivabatsira mukutsvaga nzira itsva dzezvinetso zvinoramba zvichienderera mberi. matambudziko matsva.
• Sarudza kuti uchagovera sei zviwanikwa zvakakosha. Hapana nharaunda kana nyika ine zviwanikwa zvisingaperi. Ita tsvagiridzo yekutanga kuti uve nechokwadi chekuti kugovera kwako zviwanikwa kune musoro munguva pfupi uye munguva refu. Mukugadzira kugoverwa kwezviwanikwa, tanga kufunga kunze kwebhokisi. Semuyenzaniso, pane hukama here pakati pekuchengetedzeka uye chigadzirwa branding mune post 9-11 nyika? Ko classical advertising ine musoro kune yako demographic kana niche musika? Chekupedzisira usakanganwa kuti panogara paine nguva yekushanya mukushanya. Izvi zvinoreva kuti mune ino post-Covid nguva isu tichafanirwa kuve takagadzira zvakanyanya. Sechivanhu, nguva dzekubudirira dzakaratidza basa rakanaka kubva makore akati wandei kumashure. Nenzira yakafanana, kufamba mugungwa panzvimbo pokuvaka kungaparira zvinetso zvakawanda mumakore mashomanene.
· Iva nesimba, uye usambokanganwa kunyemwerera! Edza kuona kuti mutemo unogona sei kuburitsa zvinopfuura chimwe chinhu chakanaka. Hatingofanire kugadzirira kugadziridza zvakare zvigadzirwa zvekare, asi kugona kwekugadzira kunogona kureva kudzoreredza kwaimbove mishandirapamwe yekushambadzira, yaimbove marongero kana kudzokorodza nzira yatinoshandisa nayo ivhu. Rangarira kuti nguva dzinoshanduka uye mutemo ungave usina kubudirira mune imwe nguva unogona kubudirira zvakanyanya mune imwe nguva.
· Hiya vanhu vakanakisa vaunokwanisa. Indasitiri yekushanya yakavakirwa pavanhu uye hunyanzvi hwehunhu. Hapana chinogona kuparadza indasitiri yekushanya kupfuura vanhu vanoshanda mairi vasingadi vanhu. Nepo vashandi vanogutsikana vasingavimbisi basa rakanaka revatengi, vashandi vakashatirwa vanenge vachigara vachivimbisa kushata kwevatengi. Tora nguva yekubata vanhu neruremekedzo uye uvape kudzidziswa kwakanakisa kunobvira, kwete chete munharaunda yavo yehunyanzvi asi mune dzimwe nzvimbo dzekushanya zvakare. Kana vashandi vakaita chimwe chinhu chakaipa usatumire mumwe munhu asi kuti ranga vanhu vari pamusoro. Rangarira kuti kunyangwe maneja ekushanya asingadi kuranga vamwe pane nguva apo pasina imwe nzira.
Zvimwe paWorld Tourism Network pa www.wtn.travel
More on Tourism Titbits and Tourism and More: tourismandmore.com